मुख्य क्रिप्टोकरेन्सी, जसले दिइरहेछन् राम्रो मुनाफा ! - NepalKhoj
नेपालखोज २०७८ कार्तिक ६ गते ९:३१
काठमाडौं । यतिबेला संसारमा हजारौं क्रिप्टोकरेन्सी प्रचलनमा छन् । यतिधेरै संख्या सुरुसुरुमा क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्नेहरूका लागि समस्या बन्न सक्छ । वास्तवमा कुन क्रिप्टोकरेन्सीमा भरोसा गर्ने यो आफैँमा दुविधाको विषय हो ।
त्यसका अतिरिक्त कहिलेकाहीँ कुनै क्रिप्टोकरेन्सीको भ्याल्यु अचानक शतप्रतिशत भइदिन्छ जसका कारण त्यो क्रिप्टोकरेन्सी हराउने डर पनि वृद्धि हुन्छ । यदि तपाईं क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भने, क्रिप्टोकरेन्सीका बारेमा पर्याप्त जानकारी बटुल्नुपर्ने हुन्छ । यस क्रममा केही राम्रा क्रिप्टोकरेन्सीलाई बुझनु पनि जरुरी छ । हेरौं लगानी गर्न सकिने केही क्रिप्टोकरेन्सी :
Bitcoin संसारकाे सबैभन्दा नाम चलेकाे क्रिप्टोकरेन्सी हाे । याे ओरिजिनल क्रिप्टोकरेन्सीलाई वर्ष सन् २००९ मा Satoshi Nakamoto काे नाम बाट कुनै व्यक्ति वा ग्रुपले बनाएकाे थियाे ।
धेरै जसाे क्रिप्टोकरेन्सी जस्तै Bitcoin पनि एउटा ब्ल्याकचेनमा चल्छ , जुन हजाराैं कप्युटरकाे एउटा नेटवर्क हाे र यसलेकुनै ब्रोकर वा एजेन्ट बिना रियल टाइममा ट्रान्जेक्सन भेरिरिफाई गर्छ । राम्रो सुरक्षाका अतिरिक्त कन्सेप्ट भएकाे Bitcoin कुनै पनि टाइपकाे ह्याकिङबाट पूर्ण सुरक्षित छ । अहिलेसम्म यसकाे रिटर्न पनि राम्रो पाइएकाे छ ।
Ethereum एउटा ब्ल्याकचेन नेटवर्क हाे जसकाे मूल टोकन Ether वा ETH हाे । यसलाई आम रुपमा एउटा क्रिप्टोकरेन्सी नै मानिन्छ । यदि तपाईंले एनएफटीलाई डिजिटल रुपमा बेचिएकाे कुरा सुन्नुभएकाे छ भने तपाईंलाई थाहा हुनुपर्छ कि यसलाई बढी जसाे Ethereum ब्ल्याकचेन प्रयोग गरेर प्रोसेस गरिन्छ ।
यो एउटा उत्कृष्ट प्लेटफर्म हाे जुन अपग्रेड हुन र ट्रेन्डमा टपमा रहन लगातार प्रयासरत रहन्छ । यसकाे नयाँ पहलकाे उद्देश्य, जीवाष्मा इन्धनमा विध्यमान निर्भरतामा कमी ल्याउनु हो । क्रिप्टोकरेन्सीका रुपमा यसकाे रिटर्न आश्चर्यजनक छ । बितेकाे पांँच वर्षमा यो $ ११ बाट बढेर $ ३००० भन्दा पनि बढी भएकाे छ । २७,००० प्रतिशतको यो रिटर्न सुनेर जाे काेही तीनछक्क पर्छन् ।
३. Binance Coin
$७० विलियनभन्दा बढीकाे मार्केट क्याप भएकाे BinanceCoin अहिलेकाे तेस्रो लोकप्रिय क्रिप्टोकरेन्सी हाे । यसकाे प्रयोग ट्रेड , पेमेन्ट प्रोसेसिङ वा ट्राभल बुकिङका लागिसमेत गर्न सकिन्छ । यसलाई अन्य क्रिप्टोकरेन्सी जस्तो Ethereum वा Bitcoin सँग ट्रेड वा एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ ।
४. Cardano Cardano
याे नयाँ क्रिप्टोकरेन्सी हाे, यद्यपि यसले आउनेबित्तिकै धुम मचायाे । याे यतिबेलाकाे सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेकाे क्रिप्टोकरेन्सी हाे । ठूला क्रिप्टोकरेन्सीकाे तुलनामा कम लागतमै ट्रान्जेक्सन गर्न, यसलाई नयाँ र विश्वसनीय प्रुफ-अफ-स्टेक मेथर्डका लागि चिनिन्छ । केही महिनापहिले नै यसकाे मार्केट क्याप ६९ बिलियन डलर थियाे ।
$64 बिलियन के एम–क्याप भएकाे Tether एउटा अलग किसिमकाे क्रिप्टोकरेन्सी हाे । यसलाई स्टेबल क्वाइन पनि भनिन्छ । याे अमेरिकी डलर जस्तै फिएट करेंन्सीद्वारा समर्थित छ , जसले यसलाई अन्य क्रिप्टोकरेन्सीकाे तुलनामा बढी स्थिर र भरोसायाेग्य बनाएकाे छ ।
‘सरकारले सेयर बजारलाई लगाम लगाउने नीति अँगाल्दा बजारमा निरन्तर गिरावट’